Malunga Nathi-Shenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Igama lenkampani yethu:
IShenzhen Manke Technology Co., Ltd.
Ukusukela ekusekweni kwenkampani yethu e-Shenzhen ngo-2013, sigxile ikakhulu kwi-R&D kunye nokuveliswa kwee-scooters zombane zothutho olumgama omfutshane kunye noluphakathi.iimveliso zithengiswa kumazwe angaphezu kwama-80 kunye nemimandla kwihlabathi liphela.Kwaye ibonisa ukukhula ngokukhawuleza unyaka nonyaka.
Ngokusekelwe kumava atyebileyo kwimveliso kunye nophuhliso lwee-scooters zombane kwiminyaka edlulileyo, siye savula uphuhliso olutsha kraca kunye nesikhokelo sokuvelisa sigxile kumgangatho ophezulu, umthengi osebenza kakhulu kunye nokwabelana ngee-scooters zombane.Ukusukela ngoko, uMankeel ukwaluphawu lwethu olutsha lwesithuthuthu sombane.Ukudibanisa isiseko esinzulu sexesha elidlulileyo, kodwa sijonge phambili kwikamva elibanzi.
iminyaka yamava emveliso yobungcali
Ilungelo elilodwa lomenzi wechiza lasekhaya
Ugunyaziso lwelungelo elilodwa lomenzi wechiza
ITekhnoloji yeManke lishishini lobugcisa obuphezulu eliseShenzhen, isixeko sobuchule obutsha.Sigxile ekubeni ngoyena mvelisi wobuchwephesha bee-scooters zombane ukusukela ngo-2013. Emva kweminyaka yophuhliso, siye safumana iteknoloji yethu engundoqo kunye nemigangatho ephezulu kwishishini.
I-Mankeel luphando olutsha oluzimeleyo lophando kunye nophuhliso lwemveliso yochungechunge lwe-scooter yombane phantsi kwenkampani, ivula inqanaba elitsha lophuhliso lwemveliso yohlobo olukumgangatho ophezulu kunye nokusebenza okuphezulu njengesikhokelo sethu.Inkampani ibisoloko ibambelele kumaxabiso entembeko, ukusungula izinto ezintsha, umgangatho, kunye nokwamkela utshintsho ukubonelela ngeyona nkonzo ilungileyo kumaqabane ethu kunye nabathengi.
I-scooter yethu yombane yokuqala entsha "i-Mankeel" imbonakalo yayiyilwe liqela le-Porsche, kwaye i-scooter yombane yesibini yenzelwe kwaye yaveliswa ngokungqongqo ngokwemigangatho yokhuseleko yaseJamani.sinikela ingqalelo kwinkangeleko entle yemveliso kunye nokusebenziseka lula, Okwangoku, ukhuseleko lwemveliso bekusoloko kuyeyona nto iphambili kumsebenzi wethu weR&D.kunye nokuphumeza ingcamango yokukhwela ngokukhuselekileyo kuyilo lwethu lwemveliso kunye nemveliso.Iimodeli ezininzi ezahlukeneyo nazo ziyaphuhliswa kwaye ziqaliswe, Iimveliso ezitsha ezingakumbi ziyaphuhliswa ngoku.sigxile kuzo zonke iinkcukacha, sijonge ukukwenzela isixhobo sothutho esiluhlaza nesigudileyo.
Wamkelekile ukujoyina iqela le-Mankeel lokukhwela i-scooter yombane ukuze ube lula kunye novuyo kwindlela yakho yokuhamba enekhabhoni ephantsi!
Uhambo lwakho oluluhlaza kunye nolulula luqala apha
Yiba yinkampani eyaziwayo kwihlabathi
Iphupha ngekamva, umthengi kuqala
Ukunyaniseka, ukusungula izinto ezintsha, umgangatho, ukwamkela utshintsho
Ibali leBrand likaMankeel
Xa uxinzelelo lwezothutho lusiya lusiba nzima, kwaye nombono wokhuseleko lwendalo esingqongileyo kunye nezenzo ezisebenzayo ziya zibonakala ngakumbi kwaye zingxamisekile kule mihla, sinokwenza ntoni njengabantu abazimeleyo?Zeziphi iindlela esinokwenza ngazo?
Xa i-scooter yokuqala yombane yehlabathi yenziwayo ngo-1916, abantu basenokuba khange bacinge ukuba iya kuba yindima ebaluleke ngakumbi kuhambo lomntu ngaphezulu kweminyaka eli-100 kamva, kwaye kule minyaka imbalwa idlulileyo yokuqhambuka kobhubhane, idlale enye indima ekhethekileyo. .Kusebenza ngakumbi ukukhusela abantu ngokukhwela isithuthuthu sombane ukunqanda izithuthi zikawonke wonke ezixineneyo kunye nomgama ukusuka eluntwini.UMankeel unebhongo ngokuba lilifa kunye nomsunguli weshishini eliqaqambileyo, kunye nokuphakamisa izisombululo ezingcono zohambo lwabantu.
Igama lethu lebhrendi---Mankeel lithatyathwe kwinguqulelo yegama lenkampani yaseTshayina iManke, kwaye iManke ithatyathwe kwingcinga yoshishino engundoqo kunye nesalathiso senjongo yethu yoshishino---oko kukuthi, "Phupha ikamva, abathengi kuqala".
Ukuthatha iimfuno zabathengi njengengqalelo yokuqala kuphando lwethu kunye nophuhliso lweemveliso zisebenza, iimfuno zabathengi zimele iimfuno zentengiso kunye neemfuno zeshishini lethu lonke lokuhamba umgama omfutshane wendlela eluhlaza.Ke ngoko, sikwajonge kwikamva elingaphezulu ukukhokela ukuqamba izinto ezintsha kunye notshintsho lweemveliso zothutho ezilumkileyo zomgama omfutshane, zihlala zibonelela abathengi ngeemveliso ezintsha nezikumgangatho ophezulu, ukwenza ubomi babantu bube lula ngakumbi, sithathe eli themba, ukufaka isandla kumandla ethu ukhuseleko lokusingqongileyo kwezothutho ukuba lubenobuhlobo ngakumbi kunye nokusingqongileyo.
Ngamana uhambo lwakho lungakhululeka kwaye lube lula ngenxa yeMankeel, ukonwabela uhambo lwakho oluluhlaza kunye nolulula noMankeel.
Imbali yophuhliso yenkampani
Iimodeli ezintathu ezitsha eziziphuhlisileyo kunye neziveliswa ngempumelelo
yasungulwa kwimarike ngeebhetshi, kwaye yafumana ezininzi ezintle
ingxelo evela kubathengi bethu kwihlabathi liphela.
Iimveliso eziziphuhlisileyo ngakumbi zibandakanya ii-scooters zombane ezingaphandle kwendlela
Iprojekthi iphunyezwe kwi-R&D kwaye ivelise.
IMankeel Factory ifumene umjikelo omtsha we
Brand self-uphuhliso iimveliso ziye
ipasile CE, FCC, TUV iziqinisekiso
Sibhalise ngokusemthethweni ibrendi entsha--Mankeel
Iimveliso zeMankeel zithengiswa ngaphezu kwe-80 phesheya
amazwe kunye nemimandla
Kwangalo nyaka, irhafu yonyaka yenkampani kaMankeel
intlawulo igqithe kwisigidi esinye
Iimveliso ezi-3 zeMankeel zifumene ezininzi
uyilo lwamalungelo awodwa omenzi wechiza ekhaya naphesheya
Umzi-mveliso wokuqala waseMankeel wagqitywa ngokusemthethweni
kwaye isetyenziswe kwisithili saseGuangming, eShenzhen
Iimveliso ze-scooter zombane ze-Mankeel
ufumene isatifikethi se-ECO
Iimveliso zeMankeel zaziswa ngempumelelo kwaye zathengiswa
kwiibhetshi kumaqonga amakhulu asekhaya nawangaphandle
IMankeel yasekwa eShenzhen, eTshayina, isiganeko sokuqala kwimbali
Ishishini lokuhamba elihlakaniphile phantsi kweMankeel liye labeka isiseko
IiMveliso zeMankeel kunye neSiqinisekiso soBulunga
IMankeel International Warehouse
Ukusebenzela amaqabane ethu kunye nabathengi ngcono nangexesha elifanelekileyo, siye saseka iindawo zokugcina iimpahla ezizimeleyo ezi-4 phesheya kunye nezikhululo ezihambelanayo zokulungisa emva kokuthengisa e-USA, UK, Germany, and Poland.Kwangaxeshanye, siceba ukuba neendawo ezininzi zokugcina iimpahla zaphesheya kwamanye amazwe nakwimimandla.Kuba sinokubonelela amaqabane ethu ngeenkonzo ezisebenzayo nezicingayo emva kokuthengisa.Kwaye iinkonzo zokuthumela ngenqanawa ziyafumaneka ukuba unemfuno zaloo nto.onke amaziko axhasayo anokubonelela ngenkonzo ngexesha elifanelekileyo ngumsebenzi wethu.